Faịlụ omimi – Onye amụma Brazil – JucelinoLuz
Águas de Lindoia, 18 Ọktoba 2021
9, 11 Oké ụjọ – Tsunami Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia – Mmebi Katrina, wdg Amụma ziri ezi
Enwere onye mmụọ mmụọ Brazil nke nwere nrọ nke na -ese onyinyo ọdịnihu ma na -agwa onye ma ọ bụ gọọmentị dị mkpa ozi ziri ezi gbasara ọdịnihu enwetara na nrọ ahụ, na -enwetakwa azịza. Ọ na -ebu amụma mwakpo ndị na -eyi ọha egwu na Septemba 11, 2001 na New York Trade Center Building, wee debe eziokwu ahụ na o zigaara Onye isi ala Bush n’oge ahụ (nna onye isi ala Bush ugbu a) na Ọktoba 26, 1989, yana azịza ya.
Jucelino Nobrega da Luz, aha ogologo, degara Al Gore nke United States akwụkwọ ozi na Mee 15, 1988. O buru amụma n’ụzọ ziri ezi na ‘mbibi nke gburugburu ụwa ga -adị ngwa ngwa, na ajọ ifufe na ebili mmiri na -eti Indonesia na United States, ala ọma jijiji mere na Sumatra na 2004, na Hurricane Katrina bibiri ndịda United States na 2005 ‘.
Jucelino dere akwụkwọ nchekwa gburugburu ebe obibi, Eziokwu na -adịghị mma, ma buru amụma afọ 20 gara aga na a ga -enye Gore ihe nrite Nobel Peace n’afọ a maka ntinye aka ya na nchekwa gburugburu. Ọ bụrụ na Gore meriri na Nobel Peace Prize nke afọ a- 2007, ọ ga-eju ụwa anya ọzọ dịka onye amụma tweezers gburugburu ụwa. Ọ ghọrọ prọfesọ mahadum mgbe ọ dị afọ 47, site na nwata ọ malitere ibu amụma, na -ahụ ọhụụ nke ọdịnihu na nrọ ya. Ọ na -awụpụ naanị amụma doro anya ma zie ezi, na -agwa onye ahụ oge niile tupu oge eruo ma nweta azịza, yabụ na -elekọta izi ezi na ntụkwasị obi nke amụma n’onwe ya.
N’oge mwakpo ndị na -eyi ọha egwu 9/11 na New York, o buru amụma mbuso agha US nke Iraq n’ihi mwakpo a na -eyi ọha egwu zigara akwụkwọ akụkọ ‘Miami Herald’ ma nye nkọwa nke ebe mgbaba Hussein. Agbanyeghị, ọ bụ ihe na -awụ akpata oyi n’ahụ na ebipụtaghị ya n’akwụkwọ akụkọ iji gbochie ọgba aghara n’etiti ndị America. Giucerino kwuru na ọ abịaghị n’oge ịnata akwụkwọ mgbaghara n’aka onye nchịkọta akụkọ nke akwụkwọ akụkọ ahụ.
Banyere mbibi nke ala ọma jijiji na ebili mmiri Sumatra kpatara, a gwara onye isi ala Maldives ọdachi na 1997. N’ezie, na njedebe nke 2004, nnukwu ala ọma jijiji na ebili mmiri nke 8.9 nwere oke na South Asia. Na 2003, ọ buru amụma na ọnọdụ Pope John Paul nke Abụọ na -akawanye njọ ma nwee nrọ pụrụ iche na Pope dara ọrịa na February 1, 2005 wee nọrọ n’ụlọ ọgwụ. Pope nwụrụ na Eprel 2 nke afọ ahụ.
Ekwuru na o zigara akwụkwọ ozi na Obí eze Japan na 1979 gbasara nnukwu ala ọma jijiji na ihe mberede Aum Shinrikyo na Japan.
Ihe na -akwalite izi ezi na ntụkwasị obi nke nrọ ya na -amatabeghị bụ eziokwu na ọ naghị eleghara ọrụ nke ikwenye na mgbe ọ rọrọ nrọ, ọ na -ezigara obodo ma ọ bụ onye dị mkpa ka ọ kpọọ ntị wee nata azịza.
Onye amụma a nwere ikike inye ọkụ dị anya ma bụrụ otu n’ime ndị mbụ dọrọ ndị ọchịchị ụwa aka na ntị banyere nnukwu mgbanwe ihu igwe iji chebe mmadụ na gburugburu ebe obibi (biodiversity).
Ederede sitere n’ọtụtụ akwụkwọ akụkọ, akwụkwọ akụkọ, redio na ihe nkiri telivishọn gbasara Oracle.
N’okpuru bụ njikọ iji gụọ akwụkwọ na -atọ ụtọ gbasara onye amụma a.
מיסטעריע טעקע – בראַזיליאַן נביא